Kudzokorodza chirimwa: maitiro, kutakura tsvina uye kurapwa | Green Renewables
Sezvatinoziva tese, kudzokorodza inzira yekusandura marara nekuraswa kuita zvinhu zvitsva kuitira kuti zvinhu zvitsva zvisada kushandiswa pakuzvivaka nekugadzira. Kuti uite iyi nzira yekudzokorodza nemazvo, tsvina inofanirwa kuendeswa kune yakakosha imba yekuchengetera shanduko, iyo inofanirwa kuve nenhevedzano yehunhu, ingave maererano nemichina yakakwana uye vashandi vanokwanisa, kana maererano nekugadzirisa. . Nokuti izvi ndizvo kugadzirazve zvirimwa.
Muchinyorwa chino tichakuudza zvese zvaunoda kuziva nezvezve kudzoreredza zvidyarwa, maitiro avo uye kukosha.
1 Nzira yekufambisa tsvina
2 Matanho kuchirimwa chekudzokorora
3 Kuronga tsvina uye kutamisa chirimwa
3.1 Kurapa kwemarara
4 Madimikira echirimwa chinoshandiswa patsva
Nzira yekufambisa tsvina
Kubva parori kuenda kuimba yekuchengetera kana chiteshi chekudzikunura, marara anofanirwa kupfuura nematanho akateedzana, ayo anofanirwa kuchinjirwa kune akasiyana maitiro akaunzwa navo, pamwe nevashandi vakakodzera nemichina, zvisinei nekwavakabva.
Zvichipa maitiro emhando dzakasiyana dzemarara, lmatura anofanirwa kuchinjirwa kune yega yega mhando yemarara, saka tinokwanisa kuaronga kuburikidza nemafungiro mamwe chete aya.
Chirimwa chinofanirwa kuve nechimiro chakafara chakaringana kuti chikwanise kusarudza nekuisa marara ekanzuru (MSW) mumatanho akasiyana, angave ari organic kana inorganic, yemhando yepamusoro yekupedzisira composting.
Nechikonzero ichi, muchina unoshandiswa kurudzi urwu rwekuita unofanirwa kuve wakagadziridzwa zvizere kuti uzviite, pamwe nevashandi vanoshandisa muchina kana vanotora nzvimbo mumararamiro ekuparadzanisa. Vashandi havafanirwe kuve nemhando yepamusoro chete, asi zvakare vanofanirwa kuve nemidziyo yakakodzera yekugadzirisa inova nechokwadi chekuchengetedzwa kwavo uye kuchengetedzeka pabasa.
Nezve chimiro, Imba yekuchengetera inofanirwa kuve yakakura kuitira kuti nzira dzakasiyana dzekudzokorodza dziitwe ipapo. Mukuwedzera, ivo vanofanira kugara vachichengetedza mhepo yakanaka uye chiedza chakanaka.
Matanho kuchirimwa chekudzokorora
Nzvimbo dzekurasa dzakakamurwa kuita zvikamu zviviri: zvepamba kana zvekutengesa uye zvemaindasitiri. Ndiyo yekutanga link mucheni yekudzokorodza uye ndiko kunogadzirwa marara. Nzvimbo dzekugadzira mudzimba inzvimbo dzega dzega; mabhizinesi, zvitoro, mabara, maresitorendi nezvitoro zvakajairika; uye maindasitiri, makambani nemabhizinesi. Tsvina inogadzirwa munzvimbo idzi inogona kupatsanurwa uye kudzokororwa kuburikidza nemabhini ekudzokorodza akasiyana.
Nekuda kwekambani, nekusaina zvibvumirano nemamwe makambani anoona nezvekuraswa kwemarara. Kutevera danho iri kwakakosha kudzivirira kutyora cheni.
Danho rechipiri mucheni yekudzokorodza kudzoreredza tsvina. Inosanganisira kuunganidza uye kutakura marara mumidziyo inoenderana. Kune simbi, mapurasitiki kana midziyo yesimbi, anosvika makumi mana cubic metres, macompactors, mapepa shredders uye yakawanda michina inobatanidzwa mukuita.
Kuronga tsvina uye kutamisa chirimwa
Ichi chinongedzo hachigari chiripo mumaketani. Iyi fekitori yekuunganidza marara kuunganidza zvakanyanya sezvinobvira uye kutora mukana wekufambisa pasina kufamba nenzira isina kutambisa. Muenzaniso ndewe pepa uye makadhibhokisi ekugadzirisa. Vanounganidza mhando yese iyi yezvinhu, voidzvanya mumabhaketi mahombe, vozoenda nayo kune imwe nzvimbo kubva ipapo. Izvi zvinobatsira kuderedza mari yekufambisa.
Icho chinhu chakakosha chekugadzirisa zvakare. Iri mudanho iri apo marara anoparadzaniswa uye anoiswa mumapoka, kuitira kuti zvinhu zvose zvibatanidzwe, zviunganidzwe mumapoka uye zvinogona kutakurwa zvakasiyana. Naizvozvo, basa rekugadzira uye kudzokorodza chirimwa rinosimudzirwa uye rinogadziriswa.
Danho rekupedzisira renhangemutange yedaro refu iri kuraswa kwemarara. Kune mafekitari akasiyana anoshandisa matekinoroji akasiyana kugadzirisa marara. Zvinogona kuva zviteshi zvekudzokorodza (bepa nekadhibhodhi, purasitiki, simbi, huni, girazi…), marara anodzorwa (anowanzonzi marapirwo emarara) kana mafekitari ekugadzira simba (biomass, biogas, incinerators…).
Pamusoro pematanho mashanu aya, zvinhu zvakasiyana zvinogona kuita maitiro akasiyana zvichienderana nehunhu hwazvo. Mushure mekugadzirisa, zvinhu zvaive zvakaraswa pakutanga zvinomutswa. Vanova zvinhu zvitsva. Mugari ane mutoro anoparadzanisa uye anochengeta marara nenzira kwayo. Mabhenefiti acho anosanganisira kudzikisira huwandu hwekuraswa kwemarara, kuderedza kubuda kwecarbon dioxide, kuchengetedza mvura nesimba, nekugadzira mabasa anogara aripo.
Madimikira echirimwa chinoshandiswa patsva
Kuita maitiro aya nemazvo muchirimwa chekudzokorodza, tsvina inofanirwa kutakurwa kuenda kunzvimbo yakatsaurirwa yekuchengetera zvinhu kuti igadziriswe gare gare. Izvi zvinofanirwa kuve nenhevedzano yehunhu hwakakwana, kusanganisira michina yakakwana uye vashandi vanokwanisa vanokodzera ngarava pachayo.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise maitiro kubva parori kuenda kune hangar kana muchina wekuburitsa dock. Kubva ipapo, tsvina inofanira kupinda nepakati pezvikamu zvezvikamu, iyo inofanirwa kuchinjirwa kune akasiyana maitiro ayo tsvina ichapfuura, pamwe chete nevashandi nemichina yakabatana nayo, zvisinei nekwavakabva.
Nekuda kwehunhu hwemhando dzakasiyana dzemarara, imba yekuchengetera inofanirwa kuisa mhando yega yega yemarara. Nenzira iyi, vanogona kugoverwa nemafungiro akafanana. Chirimwa chinofanirwa kuve neyakakura zvakaringana chimiro kuti chibvumire matanho akasiyana ekusarudza uye kupatsanurwa kwemarara emudhorobha (MSW). Organic tsvina inofanirwa kukwanisa kugadzira compost yekupedzisira yemhando yepamusoro.
Naizvozvo, muchina unoshandiswa kurudzi urwu rwekuita unofanirwa kunge uri muchimiro chakakwana uye unofanirwa kugadziridzwa zvizere kuti uite maitiro nemazvo. Saizvozvovo, vashandi vanobata michina iyi kana avo vane zvinzvimbo mukuparadzanisa tsvina vanofanirawo kugadzirira.
Kwete chete kuti vashandi vanofanirwa kuve vanokwanisa zvakanyanya, asi ivo vanofanirwa kuve nemidziyo yakakodzera. Neiyi nzira, unogona kuita mashandiro aunofanirwa kuita kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwakakwana uye kuchengeteka pabasa. Panyaya yechimiro, imba yekuchengetera inofanirwa kuve yakakura, izvo zvakakosha kuitira kuti nzira dzakasiyana dzekudzokorora dziitwe mairi. Mukuwedzera, ivo vanofanira kugara vachichengetedza mhepo yakanaka uye chiedza chakanaka.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve recycling chirimwa uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Kugadzirazve chirimwa